Pakutanga Vincent van Goghs Wana Unhu Hwakanaka Hwazvino
DavidBridburg September 19, 2020 March 23, 2021
Nei Vincent van Gogh Paintings?
Vincent van Gogh haana kumbotengesa chero hunyanzvi hwake. Rega izvo zvinyure mukati: kune vazhinji vedu, hunyanzvi ndezvekurwira.
Saka iripi chikamu chiri nyore kune anotanga? Iyo yedhijitari artform kune vazhinji vanhu inopa iyo yese kunakirwa kwekutora maoko ako akasviba, asi pasina chigunwe kupenda kana yakazorwa smoketi.
Kana zviitwa zvangu zvichikukurudzira kuti uedze ruoko rwako kugadzira hunyanzvi hwedigital ndichave ndinofara kwazvo kwauri. Ndizivise kuti unoita sei.
Munguva yemazuva angu echikoro chehunyanzvi takadzidza Post Yemazuva ano hunyanzvi dzidziso. Unogona kunge uchibvunza, chii ichocho? Ingoisa zvakapfuura uye zvazvino vakaroora kumusoro kuva chimwe chinhu chitsva kwazvo.
Kuti ndive akanaka kwauri, ndinofanira kubvuma kuti handisi kurwisana sezvakaitwa navan Gogh dzimwe nguva muhupenyu hwake hupfupi.
Ini ndinotengesa hunyanzvi hwangu nhasi semaposita uye mapurani e canvas.
Huya neni muzvinyorwa izvi parwendo.
Iyo Van Gogh Museum Amsterdam uye iyo Rijksmuseum
"Kuita basa rakanaka munhu anofanirwa kudya zvine hushamwari, kugara zvakanaka mudzimba, kumhanya nguva nenguva, kuputa pombi, nekumwa kofi murunyararo." "Ini handisi munhu anofarira nekuzvisarudzira asi nemhedzisiro."
Vincent van Gogh anotora mashoko https://www.vangoghgallery.com/misc/quotes.html
Mazhinji emifananidzo yevan Gogh yandakashanda nayo inogara muVan Gogh Museum Amsterdam kana iyo Rijksmuseum. Aya masangano maviri anopa mifananidzo yemifananidzo yekutora. Ndiri kugara ndichivatenda.
Kana iwe urikushanya kuAmsterdam uye uchida kuwona mamuseum, ini ndinokurudzira kuti ugadzire kumberi. Hauzombo nyadziswa.
Nzvimbo dzepamutemo dzemuseum: Van Gogh Museum muAmsterdam uye national miziyamu.
Van Gogh kumwe kwekutanga
Muna 2006 ndakafunga kuve muimbi. Pfungwa yakanga yauya mupfungwa, wadii kuisa chimiro kubva pane chimwe chidhiraivhi kuenda mune chimwe chakasiyana zvachose uchishandisa makomputa? Unogona kuona izvi zvaitwa.
Kunyangwe muna 2006 izvi zvaive zvisina kunyanyisa.
Kwemakore mashoma akatevera, ini ndakatanga kufunga zvakadii nezve kubatanidza akasiyana marudzi ehunyanzvi?
Muna 2010 ndakaita hushamwari nenjineri akarega basa, zita rekutanga Tevis. Ane kumashure kwakasimba mukutora mifananidzo. Muna 2012 ndakatanga kudzidza Photoshop.
Pakazosvika 2014 ndakapinda mukugadzira. Kutungamira kwaTevis uye mhinduro zvinondikurudzira kuti ndive nani hunhu hwemifananidzo.
Hapana chikonzero chekudzikira pasi mune zvakadzama. Iwe unoda kuona mhedzisiro.
Van Gogh Mural II naDavid Bridburg
Uri kunakidzwa nemufananidzo uyu here? Misoro iyo iri kumusoro, miswe iri pasi. LOL Vamwe venyu muchada izvi. Kune matatu akaturikidzana emifananidzo yaVincent van Gogh mumufananidzo uyu. Iwo mwaranzi unocheka imwe nhete pakadzika sezvavanopinda kubva kuruboshwe. Iwo maranzi anouya kubva kurudyi akacheka matanda maviri akadzika.
Chii chinotevera? Ndine chimwe chinhu kwandiri.
Iyo Vibrance yevan Gogh Mural III naDavid Bridburg
Iwe unogona kunakirwa nezvitsvuku nemaorenji kuruboshwe uchimhanyira mumidhi uye blues kurudyi. Iko kutenderera kwekupenda kwakagadzirwa neakavhurika chena nzvimbo inopa kudzika.
Ichi chinyorwa chine simba zvine simba chinouya chipenyu seakakurumbira Masuo eDublin ane ruvara uye hunhu.
Ndiri kuda kudzika… ..
… .Asi usatya, ndichachengeta zvinyorwa izvi padivi rekuvaraidza.
Yakacheneswa Girazi I naDavid Bridburg
Izvi zvinoenderana navan Gogh's "Masikati Zororo Kubva Kubasa". Zvinyorwa zvangu zveizvi zvinoshamisa. Kana pasina munhu akakuudza futi. LOL Iyo yakasviba bepa sarudzo zvechokwadi inoshamisa.
Nehurombo ndanga ndisingazive van Gogh pachangu. Ini handinyari nevanhu nezvezvangu zvisikwa. Akanga akarwara kana akarwadziwa muhupenyu.
Kana iwe ukaverenga zvinyorwa zvake, unogona kushamisika. Vincent aive netsamba yakanyanyisa. Kuverenga van Gogh anotora zvinonetsa kufungidzira kwakawanda pamusoro pevanorwara nepfungwa.
“Pane musiyano mukuru pakati pemumwe simbe neumwe simbe. Kune mumwe munhu ari simbe kubva muhusimbe uye kushaya hunhu, nekuda kwehunhu hwehunhu hwake. Kana uchida, unogona kunditora ndeimwe yeaya. Ikozve kune rumwe rudzi rwekusaziva, iye simbe kunyangwe iye, ari mukati anopedzwa nechishuwo chikuru chekuita uyo asingaite chinhu nekuti maoko ake akasungwa, nekuti iye, sekutaura, akasungwa kumwe kunhu, nekuti haana izvo zvaanoda kuti abudirire, nekuti mamiriro ezvinhu ane njodzi amuunza nechisimba kusvika pano. Akadaro haagare achiziva zvaanogona kuita, asi zvakadaro anonzwa zvakasikwa, ini ndakanakira chimwe chinhu! Kuvapo kwangu hakusi pasina chikonzero! Ndinoziva kuti ndinogona kuve ndakasiyana chaizvo munhu! Ndingashandise sei, ndingaite sei basa? Pane chimwe chinhu mukati mangu, asi chingave chii? Ndiye mumwe simbe. Kana uchida unganditorere chimwe cheizvi. ”
- Vincent van Gogh, Tsamba dzaVincent van Gogh
Sezvauri kuona, yangu yekutanga mifananidzo yaive ese epamoyo basa.
Kushandisa Zvimwe Zvishandiso zveDhijitari
Iye zvino ini ndinotanga kutamba nemidziyo. Iwe unombowana gadget, unoshamisika kuti chii chingaite, uye nekuuya nemimwe mitonho inotonhorera? Kana maonero matsva?
Icho chiri pasi ndivan Gogh Almond Blossoms, yakadaro yakapfava uye isinganetsi pendi.
Sphere III van Gogh naDavid Bridburg
Iyi ndeimwe yemifananidzo yavan Gogh's Cypress. Unogona kuona ini ndashandisa kupenda munzira dzakasiyana siyana. Iwe uchaona ini ndashandisa akati wandei wepasi pekupenda kakawanda.
Sphere 7 van Gogh naDavid Bridburg
Mhinduro pane chidimbu pazasi yanga ichifadza. Mavara andaita zvekare anotsvaira chinhu chakadzika mukati mevaoni.
Vincent van Gogh "Irises", ichi hachina kufanana nechinhu chero chipi chakavezwa nemufananidzo. Sezvo van Gogh aiongorora zvakanyanya muzuva rake, iwe unofunga angazoda kuongorora hunyanzvi hwemakomputa?
Inv Blend 6 van Gogh naDavid Bridburg
"Roses uye Irises", ini ndashandisa zvakanyanya pendi iyi. Kushamiswa nguva imwe neimwe nekusimba kwakazara kwependi yepasi apo ini ndaishandisa matekinoroji edhijitari.
Inv Blend 11 van Gogh naDavid Bridburg
Iko kuchinja kwemavara mukati meizvi kwakaoma. Reworking manomwe akasiyana vhezheni yakazara, iwe unogona kuwana iyo color scheme yekushongedza yako yakanaka nzvimbo. Shanduro dzakasiyana dzakapararira pamatanho matatu akasiyana: Rustic, Blend uye Inv Blend.
Inv Blend 15 van Gogh naDavid Bridburg
Pazasi pane zvimwe zveVincent van Gogh Irises. Ino nguva pendi yepazasi haina kuchinjwa. Asi zvemazuva ano zvakakwana sezvaungaona.
BW 6 van Gogh naDavid Bridburg
The Dema uye Muchena Unganidzo, BW, yaive yekuyedza kuyedza mumaonero. Unogona kuona chirimwa chimwe chete chichena chiri mutema mukati meunganidzwa.
Iyo Yakarongedzwa Unganidzo
Kuedza nezvishandiso kwakatungamira ku Iyo Yakarongedzwa Unganidzo.
Vamwe vevanyori muhupenyu hwangu avo vandinotarisa kumusoro vaindipa kurumbidza pamabasa aya. Ndakapepereswa nemhepo uye nekutenda.
"MaAlmond Blossoms" ekurapa kwedhijitari akaratidza zvakare kusimba senge svikiro pazvinangwa zvangu. Iwo mavara akaitirwa kubata iwe kutarisisa. Inoshanda sezvishamiso zvidimbu zvemba yako.
Yakarongedzwa 2 van Gogh naDavid Bridburg
Iko kusanganiswa kwe "Roses uye Irises" kunopesana ne "Maamondi Maruva" kune hanzvadzi chidimbu neAlmond Blossoms mune girini. Mune tsvuku iyi festive. Mune rakapfuma girini muraibhurari yako kana imba yekutandarira hunyanzvi hunorumbidza huni.
Yakarongedzwa 5 van Gogh naDavid Bridburg
Iwe unonzwa sei nezve orenji tsvuku? Maonero angu orenji akatsvuka semwana akandisiya ndichishamisika. Navy blues inokwira pablack zvakanyanya mukutya. Zvichienderana nesaizi yekudhindwa uyu mufananidzo unomhanya kubva kudiki uye kusingaoneki kusvika kune yakakura uye ine simba.
Yakarongedzwa 9 van Gogh naDavid Bridburg
"Masikati Zorora Kubasa", urwu ndirwo rudo. Paive nehumwe mufaro mukugadzira ichi chazvino.
Yakarongedzwa 14 van Gogh naDavid Bridburg
Sezvo ini ndakarondedzera kwauri mune ino blog, ini ndinosanganisa mhando. Nyaya iri mumifananidzo yazvino inova chinhu. Iwe unogona kunge uchikwenya musoro wako, ndinoreva kuti mufananidzo wemunhu ikozvino chinhu.
Kuti uratidze izvi kwauri ini ndinosanganisa imwe van Gogh uye maviri asiri van Gogh mifananidzo. Iwe unogona zvakare kuona iyo Contemporary Unganidzo.
Iko kuunganidzwa kwemifananidzo kunofamba kubva pachinhu kuenda kuchinhu, wozoenda kumaminetsi mashoma.
Contemporary 2 van Gogh naDavid Bridburg
Iye Muchinda mune rokwe zvino ave mupurasitiki yekumonera kunge chidhori.
Contemporary 5 Hanneman naDavid Bridburg
Chii chaizofungwa naMichelangelo? Maziso ake anogona kusanzwisisa kuti chii ichi icon. Isu tinoona silhouette yaDavid. Iko kufamba kuri nyore kwemazano ndiko kukuita iwe.
Yazvino 12 Michelangelo naDavid Bridburg
Kubva kune nyika yemazuvano mazano iwe wave kuda kupinda mune yakasarudzika maonero pane hunyanzvi. Ndiyo dudziro yekunyanyisa? lol
Unogona kunge uri kuona pateni pano. Ini handimbogadzikana munzira imwechete yebasa. Iyi yaive taboo yevanyori. Ini ndine yakawanda yekudzosera kumashure mune yangu maartist madenderedzwa yekusatora imwe yeumwe maitiro.
Kutanga ndinofunga kukuvaraidza iwe zvine basa. Chechipiri kushandisa zvigadzirwa zvemadhijitari zvakandibvumidza ivo varaidzo yerusununguko. Yetatu ini handisi mugarari yekugadzwa iri kutaurwa nemuridzi wegalari. Kureva kuti chii chinotengesa imhaka yehukama hwangu newe. Hapana mumwe munhu achazozviona izvo uye nekundichengeta kune imwechete maitiro kana zano rimwe.
Tumira Post Art
Uyu ndiye American Intellectual Unganidzo Murals tsanangudzo:
“Post Pop Art, nyika hombe yekufunga uye zviroto zveAmerica. Aya anodhindwa anogona kudhindwa kusvika pahukuru hwe9 x 4 tsoka. Diki saizi dzinotaridzika kunge dzakakura kwazvo.
IAmerican Intellectual Collection Murals naDavid Bridburg
Pop Art iri kunetsekana netsika yedu kubvira Hondo yeVietnam. Post Pop Art inobatanidzwa nekunetseka kukuru kwetsika yedu mumakore achangopfuura. Mavara anounzwa, kureva mapingi, matsvuku, orenji uye yero. Kufambisa hunyanzvi kure nenyika yepanyama yemagreen.
American Intellectual 6 naDavid Bridburg
Ndiri kuona American Intellectual 6 muNew York City penthouse. Iyi mural ine simba uye runako zvinoita chirevo.
American Intellectual 7 naDavid Bridburg
American Intellectual 7 ndicho chidimbu chehanzvadzi. Iyo chaiyo bastardization yavan Gogh Almond Blossoms inobvunza tsika tsika yepfungwa. Aya mabasa ane simba mune zvematongerwo enyika. Kunyanya kudzika muzvinhu zvisingabvumirwe, ndinokusiya iwe kuti ufunge pamusoro pezvinoreva.
Kungwara kwangu kwakapesana nemunyori uye ngano Mark Twain.
“Vanhu vari kuyedza kutsvaga chinangwa munyaya iyi vachatongwa; vanhu vari kuyedza kutsvaga hunhu mariri vachadzingwa; vanhu vari kuyedza kutsvaga zano mairi vachapfurwa.
GG, CHEIF WEMAONO ”
- Maka Twain, Iyo Adventures yaHuck Finn
Inotevera pinks uye turquoise muAmerican Intellectual 11. Iyi idivi rakasiyana kwazvo kwauri Ribhoni riri mune yako yakajeka zuva rakakura imba yekutandarira. Van Gogh's "Almond Blossoms" ndiwo ari musimboti.
American Intellectual 11 naDavid Bridburg
Pazasi iwe unoona French purazi minda kubva 135 makore apfuura. Pendi yepazasi yakagadziridzwa neni kutanga, uye yakashandiswa mumabasa epamberi. Matenga akasvibira uye goridhe rakapfuma yero ndidzo shanduko dzangu.
Iyo isingabvumirwe iri zvinyoro nyoro kudonha pamusoro penyika parutivi mufananidzo.
American Intellectual 13 naDavid Bridburg
Kuvandudzwa kwaVincent van Gogh
The Zvematongerwe Enyika Unganidzo hunyanzvi hwemazuva ano, asi pasi pemuraira wePostmodernism.
Uri kushamisika, chii chinonzi "scrog"? A scrog isimbi yesimbi mesh pamusoro pekukura mbanje zvirimwa. Iwo mabukira echirimwa anodhonzwa kuyambuka mesh kuti mbeu ikure yakawanda budhu.
Inotorwa senge nyaya yezvematongerwo enyika, mbanje yakakosha mune ino uye ikozvino. Isu tiri muhusungwa vanhu vakasara uye kurudyi mhosva dzakanangana nekushandisa kwavo zvinodhaka. Uku kutambisa mutero unobhadhara mari pane zvakanakisa. Pakanyanya kukiya vanhu kumusoro zvinokuvadza mhuri zhinji zvisina basa. JMO Kubva panguva iyi yekunyora zvinhu zvanga zvichichinja.
Ini handisi munhu anosvuta kana kusvuta mbanje.
Iwo mazita anomhanya se "Recent x". Ichangopfuura kuve fananidzo yanhasi. "Recent" inochengetedza nzvimbo ye "Isina Musoro" iyo yakashandiswa kushambadza nauseum nevazhinji maartist. Mune angu maunganidzwa ndinoita irworudzi urwu rwezita kuchinjisa kunze munzira diki dzakasiyana.
Iwe urikubvunza chii chinoita kuti ino yazvino misoro kuunganidzwa Postmodernism? Iko kusanganiswa kwekare uye kwazvino.
Vincent van Gogh minda yepurazi yakaiswa muBritish Museum skylight. Iwe uchawana zvine hutsinye zvakaoma zvematongerwo enyika zvirevo muunganidzwa sekumutsa kufunga. Uye iwe unowana imwe yakanaka kwazvo mifananidzo.
Recent 9 naDavid Bridburg
Mufananidzo uri pazasi harisi basa rinotora van. Mufananidzo wacho unotungamira kumufananidzo weVincent van Gogh wakatorwa. Aya maviri anotevera zvidimbu zvehanzvadzi sezvaunoona.
Recent 33 naDavid Bridburg
Sezvo iwe paunotarisa pamusoro pane izvo zvisingabvumirwe, iwe unoona iyo tonal mhando? Sa Post Post mugadziri ini ndiri ruvara agnostic. Postmodernism haina chaizvo dzidziso yevara. Ini ndakagadzira mashoma emavara maficha achienda kumufananidzo kumufananidzo. Tonal mhando yakakosha kwandiri.
Mune mazhinji emabasa angu ndinodzokorora chimiro chechimiro. Iyi ndeimwe yenguva idzodzo. Ndingafare kwazvo kana iwe ukataura pazasi pamufananidzo. Kugara uchiita nevandinotora, ndinoda kuziva zvaunofunga.
Recent 34 naDavid Bridburg
Ichi chifananidzo chakajeka kwazvo. Cheery. Vincent, mupendi, angashandisa maturusi edijithali? Icho chokwadi chenyaya Vincent chaive chekuyedza muimbi seakamborarama.
Izvi zvinoshamisa zvemazuva ano. Handina kuzorora pamadiro angu. Aesthetically iyo mifananidzo haisi yavan Gogh's. Mhedzisiro yacho ndeyangu zvechokwadi. Mune hunyanzvi ichi chinzvimbo chakashinga kwazvo kutora.
Zvandakakurongera iwe semuverengi kwaive kuvaraidzwa kwakareruka. Unogona kuona kuomarara kuchimhanya zvakanyanya. Postmodernism yakafungidzirwa pamberi pehunyanzvi hwemakomputa kupinda mune yayo. Pfungwa dzangu nekushandisa zvakasarudzika kwazvo.
Kukumbira ruregerero kwauri. Semhizha pane kurwira kuti uwane raramo. Kuridza runyanga rwangu ndiyo nzira yekuti unyatsonzwika. Kana iwe ukaona iro basa rehunyanzvi iwe unofarira zvechokwadi ndokumbira unditengese.
Ndatenda nekuverenga zvinyorwa zvangu.
Dzvanya pane chero ipi yemifananidzo yangu yaunofarira kuona iyo peji rekutengesa peji pawebhusaiti yangu (haishande kune iyo chifukidziro chemufananidzo kumusoro)
Mubvunzo: Iko kuvandudzwa kwemifananidzo yaVincent van Gogh izano rakanaka here? Sezvo iwe uchipfuura nepakati pemifananidzo, iwe uchaona ini ndaenda kupfuura kupfuura kungovandudza hunyanzvi hwaVincent.